तर, वर्षेनी चुरोट सेवनका कारण हजारौँ युवाहरुको ज्यान जाने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको एक अध्ययन अनुसार देशका धेरै युवाहरु चुरोटको लतमा फसेका छन् ।
एक अध्ययन अनुसार विश्वमा १ बिलियनभन्दा बढी चुरोट सेवनकर्ताहरु रहेका छन् । त्यस्तै ८० प्रतिशत विकसित देशहरुबाट रहेका छन् । डब्लु एच ओ र सिआइए फ्याक्टबुकले जारी गरेको एक रिसर्च अनुसार
१०. चिलीः ३८ प्रतिशत युवाहरु चुरोट सेवन गर्छन्
९. बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनाः ३८.३ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा
८. लेवनानः ३८.३ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्
७. रसियाः ३९.१ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्
६. इण्डोनेसियाः ३९.८ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्
५. जोर्डनः ४१ प्रतिशत प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्
४. सर्भियाः ४१.६ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्
३. ग्रिसः ४२.४ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्
२. नाउरुः ४७.५ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्
१. किरिबाटीः ५२.२ प्रतिशत युवाहरु चुरोटको लतमा रहेका छन्